पर्सामा कोरोनालाई जितेका ६ जना डिस्चार्ज - Hamro Najar
प्रकाशित मिति: २०७७ श्रावण १७, शनिबार (१ साल अघि)
वीरगन्ज । पर्सामा शनिबार ६ जना कोरोनालाई जितेर डिस्चार्ज भएका छन् । नारायणी अस्पताल कोरोना विषेश अस्थायी अस्पताल गण्डकबाट ६ जना पुरुष डिस्चार्ज भएका नारायणी अस्पतालका डा. उदयनारायण सिंहले जानकारी दिए ।
डिस्चार्ज हुनेमा सबै पुरूषहरू पर्सा जिल्लाकै रहेको नारायणी अस्पतालका डा. सिंहले जानकारी दिए । उनीहरुको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको १० दिनमा कोरोनालाई जितेर घर फर्केको उनले बताए । गण्डक कोभिड अस्पताललमा पछिल्लो समय ६० जना संक्रमित भर्ना गरिएकोमा २६ जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् ।